Samachar Batika || News from Nepal » यी हुन् सरकारी जागिर छाडेर कलाकारिता अंगाल्ने ५ सफल कलाकारहरु, हेर्नुहोस !
यी हुन् सरकारी जागिर छाडेर कलाकारिता अंगाल्ने ५ सफल कलाकारहरु, हेर्नुहोस !
अझै पनि हाम्रो समाजमा सरकारी जागिर गर्नेको सान, मान र ईज्जत नै छुट्टै हुन्छ। छोरीको बिहे गर्नु पर्यो भने पहिला जागिर के गर्नु हुन्छ भनेर सोधिन्छ र यदि सरकारी जागिरे रैछ भने ल छोरी पाल्न सक्छ भनेर विश्वास गरिन्छ। बेरोजगारीले थलिएका धेरै शिक्षित युवाहरु लोक सेवा र सरकारी जागिरको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै जीवनको लगभग आधा समय नै बिताई दिन्छन। प्राईभेट जागिर भन्दा सरकारी जागिरको क्रेज कति छ भनेर त २ सय मागेको ठाउमा २ हजार युवाहरुले फाराम भरेको देख्दा नै थाहा पाऊनु हुन्छ।
तर यहाँ यस्तो व्यक्तिहरु पनि छन् ,जसले हुदा खादाको सरकारी जागिर छाडेर कलाकारितामा लाग्ने मुर्खता गरेका छन्। उनीहरुले नराम्रो गर्न खोजे ,यो त बिलकुलै होइन, किनकि मानिसले जुन सुकै काम गर्दा पनि आफुलाई सुहाउने र आफ्नो रुचि के मा छ त्यहि गर्नु पर्छ,अनि मात्र सफल हुन सकिन्छ। आज हामी सरकारी जागिर छाडेर कलाकारितामा नाम र दाम कमाउन सफल ५ कलाकारहरुको बारेमा कुरा हामिले माथी गरीसकेका छौ ।
प्रकाशित मिति १५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ११:३८